“A ga-anwa gị ọtụtụ ọnwụnwa n’ụlọ akwụkwọ, ya bụ, ka ị ṅụọ sịga, ọgwụ ike ma ọ bụ nwee mmekọahụ rụrụ arụ. Ị ma na ihe ahụ ndị ọgbọ gị chọrọ ka i mee bụ ihe nzuzu. Ma ka oge na-aga, ya adị gị ka í soro ha.”—Eve.
NDỊ mmadụ na-achọkarị ịdị ka ibe ha. Nsogbu ndị ọgbọ mmadụ na-enye ya na-emekarị ka onye ahụ chọọ ime ihe ndị ọzọ na-eme. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na papa gị na mama gị bụ Ndị Kraịst, ha akụzierela gị na omume ndị dị ka ịkwa iko na ịṅụ oké mmanya adịghị mma. (Ndị Galeshia 5:19-21) Ma, ọtụtụ ndị ọgbọ gị na-agwa gị ka i soro ha na-eme omume ndị ahụ. Ì chere na ha chebaara omume ndị ahụ echiche ma jiri aka ha kpebie na ha ga na-eme ya? Ọ bụchaghị otú ahụ. Ọtụtụ mgbe, ọ bụ ndị ọzọ kụziiri ha ya. Ha chọrọ ka ha na ndị ọzọ dịrị ná mma, ọ bụ ya mere ha ji kwe ka ndị ọzọ kụziere ha ihe ha ga na-eme. Ị̀ na-eme ka ha? Ka ị̀ na-agbagidesi ụkwụ ike n’ala mee ihe ị ma ziri ezi?
Ọ dị otu mgbe Erọn, nwanne Mozis, mere ihe ndị mmadụ gwara ya. Mgbe ụmụ Izrel gbara ya gburugburu, gwa ya ka o meere ha chi, o mere ihe ha gwara ya! (Ọpụpụ 32:1-4) Chegodị echiche, onye a bụ nwoke gakwuuru Fero, kaa obi zie ya ozi Jehova ziri ya. (Ọpụpụ 7:1, 2, 16) Ma mgbe ụmụ Izrel ibe ya nyere ya ezigbo nsogbu, o mere ihe ha gwara ya. O doro anya na ọ kaara ya mfe ịkata obi gakwuru eze Ijipt karịa ịjụ ime ihe ndị Izrel ibe ya chọrọ!
Gịnwa kwanụ? Ọ̀ na-esiri gị ike ime ihe ị ma ziri ezi? Ị̀ chọrọ imeri nsogbu ndị ọgbọ gị na-enye gị n’atụghị ha ụjọ? Ị ga-emeli ya! Ihe dị mkpa ị ga-eme bụ ibu ụzọ mata ihe na-achọ ime ma kpebie ihe ị ga-eme tupu o mewe. Lee ihe anọ ga-enyere gị aka.
1. Mata ihe nwere ike ime. (Ilu 22:3) Ọtụtụ mgbe, i nwere ike ịmata nsogbu na-aga ịbịa. Dị ka ihe atụ, ka e were ya na ị hụrụ ebe ụmụ akwụkwọ ibe gị nọ na-aṅụ sịga. Ọ̀ dị gị ka ha ga-enye gị sịga ahụ ka ị ṅụọ? Ọ bụrụ na ị mata ihe na-aga ime, ị ga-ekpebi ma ị̀ ga-esi ebe ahụ ma ọ bụ ebe ọzọ gafere.
2. Chee Echiche. (Ndị Hibru 5:14) I nwere ike jụọ onwe gị, sị: ‘Ọ bụrụ na m soro ha mee ihe a, olee otú obi ga-adị m ma e mechaa?’ N’eziokwu, ndị ọgbọ gị nwere ike ịhụ gị n’anya mgbe ahụ. Ma, olee otú obi ga-emecha dị gị ma gị na papa gị na mama gị ma ọ bụkwanụ gị na Ndị Kraịst ibe gị nọrọ? Ị̀ chọrọ imebi adịm ná mma gị na Chineke naanị ka i mee ihe ga-atọ ụmụ klas unu ụtọ?
3. Kpebie Ihe Ị Ga-eme. (Diuterọnọmi 30:19) Mee elu mee ala, ndị ohu Chineke niile ga-ekpebi ma hà ga-ekwesị ntụkwasị obi ma nweta ngọzi ga-esi na ya pụta, ma ọ bụ na ha agaghị ekwesị ntụkwasị obi ma taa ahụhụ ga-esi na ya pụta. Mmadụ dị ka Josef, Job, na Jizọs mere ihe dị mma, ebe Ken, Isọ, na Judas mere ihe na-adịghị mma. Ugbu a, o ruola gị n’aka. Gịnị ka ị ga-eme?
4. Mee Ihe I Kpebiri. I nwere ike iche na ọ bụ ebe a ka okwu kacha sie ike. Ọ bụghị eziokwu! Ọ bụrụ na i chebarala ihe ga-esi na ya pụta echiche ma kpebie ihe ị ga-eme, ọ ga-adịrị gị mfe ikwu ya ekwu—ọ ga-abakwara gị uru. (Ilu 15:23) Enyela onwe gị nsogbu—ọ bụghị ihe ị ga-agụwara ndị ọgbọ gị Baịbụl. Naanị ịsị mba ma nọsie ike na ya ezuola. Ma ọ bụ, ị chọọ ikwu ihe i kpebiri hoo haa, i nwere ike ikwu, sị:
“Agaghị m eso!”
“Anaghị m eme ụdị ihe ahụ!”
“Mbanụ, i kwesịrị ịma na agaghị m eme ụdị ihe ahụ!”
Ihe dị mkpa bụ ikwu okwu ozugbo n’amaghị ọnụ jijiji. I mee otú ahụ, o nwere ike iju gị anya na ndị ọgbọ gị ga-akwụsị ozugbo inye gị nsogbu! Ma, ọ́ bụrụkwanụ na ha achịwa gị ọchị? Há sịkwanụ gị, “Gịnịdị na-eme gị—ị̀ bụ onye ụjọ?” Ghọta na ihe mere ha ji achị gị ọchị bụ ka i mee ihe ha chọrọ. Gịnị ka ị ga-eme? Tụlee aro atọ ndị a.
● I nwere ike ikweta ihe ha kwuru. (“Ekwela m, abụ m onye ụjọ!” Kwuzie ná nkenke ihe mere i ji jụ.)
● I nwere ike ime ka ọ bụghị gị ka ha na-agwa, ma kwuo ihe i kpebiri ime. Gị na ha esela okwu.
● I nwere ike ịgwa ha ihe ga-eru ha n’ahụ́. Gwa ha ihe mere i ji jụ, ma kwuo ihe ga-eme ka ha chetụ echiche. (“Echere m na unu ma ihe, unu ana-aṅụ sịga!”)
Ọ bụrụ na ha ka na-akparị gị, si ebe ahụ pụọ! Ọ bụrụ na ị nọrọ ebe ahụ, ha ga na-enyekwu gị nsogbu. Ọ bụrụgodị na i si ebe ahụ pụọ, cheta na i meriela nsogbu ahụ. I kweghị ka ndị ọgbọ gị mee ka i mee ihe ha chọrọ!
Ụfọdụ ndị ọgbọ gị nwere ike ịkparị gị, gwa gị na ọ bụ onye ọzọ na-echere gị echiche. Ma, ọ bụghị eziokwu! N’eziokwu, Jehova chọrọ ka ị chọpụta n’onwe gị na ihe ga-aka abara gị uru bụ ime uche ya. (Ndị Rom 12:2) N’ihi ya, ekwela ka ndị ọgbọ gị na-apị gị ka nwa bebi. (Ndị Rom 6:16) Mee ihe ị ma na o ziri ezi!
N’eziokwu, i nweghị ike ime ka ndị ọgbọ gị ghara inye gị nsogbu. Ma i nwere ike ịma ihe ị ga-eme. Gwa ha ihe i kpebiri ma nọsie ike na ya. Mee elu mee ala, ọ bụ gị ga-ekpebi ihe ị ga-eme!—Jọshụa 24:15.
GỤKWUO BANYERE ISIOKWU A NA NWANNE AKWỤKWỌ A E BU ỤZỌ BIPỤTA, ISI NKE 9
Ị̀ na-ebi ndụ ihu abụọ? È nwere uru ọ ga-aba ma papa gị na mama gị mata?
“Onye ya na ndị maara ihe na-eje ije ga-ama ihe, ma ihe agaghị agaziri onye ya na ndị nzuzu na-emekọ ihe.” —Ilu 13:20.
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwekwu obi ike, gụọ ahụmahụ ndị dị n’akwụkwọ anyị banyere ndị ohu Jehova nke oge a bụ́ ndị kwụsiri ike n’ihe ziri ezi.
Ị gachaa ụlọ akwụkwọ, gị na ọtụtụ ụmụ klas unu agaghị ahụ anya mgbe otu afọ gachara. Ọtụtụ n’ime ha nwedịrị ike ichefu aha gị. Ma ndị ezinụlọ unu, na nke ka nke, Jehova Chineke, ga-achọ ka ihe dịrị gị mma mgbe niile.—Abụ Ọma 37:23-25.
Ihe m ga-eme ga-enyere m aka imeri nsogbu ndị ọgbọ m ga-enye m bụ ․․․․․
Ọ bụrụ na ndị ọgbọ m agbalịa ime ka m mee ihe na-adịghị mma, ihe m ga-eme bụ ․․․․․
● Olee ihe ndị ọ ga-abụ ha mee, ihe anọ ahụ e kwuru n’isiokwu a enyere gị aka?
● Gịnị nwere ike ime ma ọ bụrụ na i kwe ka ndị ọgbọ gị nwata gị?
● Olee ụzọ ụfọdụ ị ga-esi emeri nsogbu ndị ọgbọ gị na-enye gị?
[Ihe odide gbatụrụ okpotokpo nke dị na peeji nke 131]
“Ọtụtụ ụmụ okorobịa ma na m bụ Onyeàmà Jehova, ha na-akwanyekwara m ùgwù. Ha chọwa ịkpa ụbụbọ na-adịghị mma, ha na-agwa m, sị: ‘Mike, o nwere ihe anyị chọrọ ikwu, n’ihi ya, ị chọọ ịpụ, pụwa.’”—Mike
[Chaatị dị na peeji nke 132 na 133]
Ihe m ga-eme ma ndị ọgbọ m nyewe m nsogbu
1 Chee Ihe Ga-eme
Olee ọnwụnwa ha nwere ike ịnwa m? Ịṅụ sịga.
Olee ebe ha nwere ike ịnọ nwaa m? Ebe ndị mmadụ na-anaghị anọkarị.
2 Chee Echiche
Gịnị ga-eme ma ha nwata m?
M ga-akpasu Jehova na ndị mụrụ m iwe.Akọnuche m ga na-apịa m ụtarị. Ọ ga-eme ka o sikwuoro m ike ịsị ha mba mgbe ọzọ.
Olee ihe ga-eme ma m jụ ime ya?
Ha nwere ike mawa m njakịrị ma ọ bụ kọwa m ọnụ. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ibe m nwere ike na-agbara m ọsọ. Ma, m ga-eme ka obi tọọ Jehova ụtọ, m ga-enwekwukwa obi ike.
3 Mee Mkpebi
Ọ bụrụ na mụ aṅụọ ya, ihe kpatara ya bụ
Ejikereghị m ejikere tupu ndị ọgbọ m enyewe m nsogbu. Ime ihe ga-atọ ndị enyi m ụtọ dị mụ mkpa karịa ime ihe ga-atọ Jehova ụtọ.
Ihe mere m ga-eji ajụ bụ
Ama m na ọ ga-ewe Jehova iwe, marakwa na ịṅụ sịga ga-akpatara m ọrịa.
4 Mee Ihe I Kpebiri
Ihe m ga-eme bụ
ịsị ha mba ma si ebe ahụ pụọ.
Ọnụ Ha Ga-akọ M
Otu onye sị m: “Nnaa, werenụ sịga a. Ka ụjọ ọ̀ na-atụ gị?”
Ihe m nwere ike ime bụ
Ikweta na ụjọ na-atụ m
“Ekwela m. Ụjọ na-atụ m ịṅụ sịga. Achọghị m ịrịa ọrịa kansa akpa ume.”
Ime ka ọ bụghị m
“Dewe sịga gị.”
Ịgwa ya okwu
“Anaghị m aṅụ. Echere m na ị ma ihe, gị ana-aṅụ sịga!”
IHE Ị GA-EBU N’OBI: Ọ bụrụ na ha akwụsịghị nsogbu ha na-enye gị, si ebe ahụ pụọ ozugbo. Ọ bụrụ na ị nọrọ ebe ahụ, ha nwere ike ime ka ị ṅụọ sịga ahụ. Dezie ihe ị ga-eme n’ohere dị na peeji nke ọzọ.
Depụta ihe a!
Olee ọnwụnwa ha ga-anwa m? ․․․․․
Olee ebe ha nwere ike ịnọ nwaa m? ․․․․․
Ọ bụrụ na mụ emee ihe ha chọrọ, ihe kpatara ya bụ . . .
Ihe mere m ga-eji ajụ bụ . . .
Ihe m ga-eme bụ. . .
Otu onye sị m: ․․․․․
Ikweta ọnụ ọ kọrọ m
Gị na papa gị ma ọ bụ mama gị ma ọ bụ enyi gị toro eto mụgharịa ihe ị ga-agwa ha.
[Foto dị na peeji nke 135]
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla ndị ọgbọ gị gwara gị, ị ga-aghọrọ ha nwa bebi
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Olee Otú M Ga-esi Merie Nsogbu Ndị Ọgbọ M Na-enye M?
yp2 isi 15 p. 128-135